Lataliyaha sare amniga ee Deni iyo saraakiil ka socotay EU-da oo kormeeray taliska Booliska
Booliska Puntland oo qoondadooda laga siinayo deeqaha Midowga Yurub
By WARIYAHA GAROWE
GAROWE, Puntland - La taliyaha sare ee Amniga Madaxweynaha Puntland Maxamad Cabdiraxman Maxamad oo ay weheliyaan la taliyaha Amniga & dowlad wanaagga Wakiilka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Thomas Kirchner iyo la taliyaha arrimaha siyaasadda xafiiska midowga Yurub ee gobolka fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi David Korprla ayaa kormeer ku tagey Taliska Booliska Puntland ee caasimadda Garoowe.
Booqashadaas oo salka ku haysey u kuurgelidda arrimaha Booliiska, tageerada midowga Yurub qorsheynayo inuu siiyo barnaamijka dib u loogu dhisayo ciidanka Booliska Puntland ayaa waxay xafiiska Taliska kula kulmeen Taliye Xigeenka ciidanka Booliska Puntland Cismaan Xasan Cawke Taliye Xigeenka CID Cismaan Cabdi Maneeno iyo taliyaha qaybta Booliiska gobolka Nugaal Cabdixamiid Maxamed Dirir.
Waftiga Midowga Yurub iyo la taliyaha sare ee Amniga Madaxweynaha Puntland ayaa warbixin ka dhegeystey saraakiisha ciidanka, waxa ay sheegeen iney jirto baahi loo qabo in ciidanka Booliiska Puntland qaybtooda ka helaan deeqaha midowga Yurub ugu talagaleen dib u dhiska ciidamada.
Sidoo kale, Midowga Yurub ayaa wada qorshe dib loogu dhisayo ciidanka Booliska Soomaaliya, kaas oo la filayo inuu ciidamada shisheeye ee jooga koonfurta Soomaaliya kala wareegaan sugidda Amniga degaanadaasi, gaar ahaan sugidda amniga caasimadda Muqdisho.
Madaxweyne Saciid Deni ayaa sheegay inuu kobcinayo dhaqaalaha, lana dagaalamayo musuqa.
Shirka Maalgeshiga Puntland oo "bedelay sawirka Soomaaliya"
Puntland 16.09.2019. 06:54
Qori-isu-dhiibka doorashooyinka Soomaaliya oo laga digay in la wiiqo
Soomaliya 26.05.2020. 04:30
Madaxweyne Deni oo magacaabay Wasiiro iyo Wasiiru Ku-xigeeno
Puntland 22.05.2020. 21:53
Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland oo is-casilay xilli Gaas is-sharxay
Puntland 19.12.2018. 12:34
Daacish iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay duleedka Qandala
Puntland 17.12.2018. 12:37
Musharixiinta Puntland oo war culus soo saarey, digniina u diray Gaas [Daawo]
War Saxaafaded 01.12.2018. 18:26
Puntland oo karantiishay dad horleh oo lagu tuhmay Coronavirus
Puntland 20.04.2020. 20:50
Madaxda maamuladda Soomaaliya oo shir fool-ka-fool ah yeelanaya 06.07.2020. 07:30
Puntland oo joojisay dhismeyaasha iyo deegaameynta dhul-daaqsimeedka 06.07.2020. 07:20
Maxaa kasoo baxay kulankii gudoonka BF iyo hogaanka Madasha Xisbiyada? 06.07.2020. 07:05
Diblumaasiyiin safmarka Covid-19 dartiisa uga baxaya Sacuudiga 06.07.2020. 06:50